88 New Generation Students: July 2011
Invitation for Kachin Community Party
We, Kachin National Organization - UK would like to cordially invite you to be present at the Fund Raising BBQ Party which will be held on 30th July, 2011 in London.
As we all have known about the current situation in Kachin Land, thousands of refugees have fled to China-Burma Border. Most of refugee camps are in extremely poor condition. Also, there are several hundreds of IDP hiding in the Jungles with no access of any form of help from the Relief Action Network for IDP and Refugee, which is founded by actors such as the IDP and Refugee Relief Committee (IRRC) and other civil departments of the KIO, faith-based organizations, local civil society organizations (CSOs) and an INGO. Due to the population of IDP and refugees grows, emergency needs including food, shelter, health and medical care, and schooling for children surpass the current available resources of these organizations. Thus, these organizations are facingahuge challenge in terms of fundraising in the long run.
KNO-UK is at their endeavour to raise refugee fund with compassion from our heart through all possible means within the UK. This is one of our programs and we would like to request all of our UK based alliances to join hands by getting involved into our programs.
Therefore, your participation is not only essential but also very much grateful and appreciated.
You will be served with delicious Kachin style BBQ and Unplugged Music Entertainment throughout the Party.
Date – 30th July 2011
Place – 8 Dene Avenue
Middlesex TW3 3AH, London.
Time – 3PM- 7PM
Entry fee - £10 (Drinks Excluded)
At the party, we accept donations for the kachin refugees in Kachin State.
Kachin National Organization - UK
Posted by ngs at 07:26
Daw Aung San Suu Kyi speech on Martyrs' Day Ceremony July 19 2011
Posted by ngs at 14:02
Invitation to the demonstration to call for the unconditional release of all political prisoners in Burma
It is our great honour to invite you all, to participate and support the demonstration which is going to call for “the unconditional release of all political prisoners in Burma immediately”.
With the increasing oppression of the “so called” Burmese government and its recent atrocious attack on our peaceful political dissidents, who had exercised basic prisoners’ rights by calling for better prison conditions, has proved us there has been no progress towards genuine amnesty of freeing all political prisoners. Instead, these political prisoners have gone through more horrible prison conditions, being banned from family visits in the notorious confinement punishment cells.
We are so much concerned about this unfair silencing, especially the safety of all political prisoners. Besides, there are still 1,994 political prisoners who remain behind bars, facing constant threat and hardship from the Burmese government while serving unduly harsh and extreme prison terms.
We would respectfully like to request all brothers and sisters, to show our unified support for our heroes and their huge sacrifice for our freedom till the “so called” Burmese government respond their unfair conduct on all political prisoners sensibly.
The following dates are set to have demonstrations to call for the unconditional release of all political prisoners in Burma:
Date : 21st July (Thursday)
: 18th August (Thursday)
: 1st September (Thursday)
Thanking in advance for your continued support!
Posted by ngs at 11:00
၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
Posted by ngs at 10:53
(အာဇာနည် ဦးဘဝင်း၏သား ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူး)
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အာဇာနည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ် နောက်ခံများအား စစ်အာဏာပိုင်များက
ဖျောက်ဖျက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် နောင်လာနောက်သားများအနေနှင့် အဆိုပါသမိုင်းနှင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကိုပါ လေ့လာစေလိုကြောင်း အာဇာနည်ဦးဘဝင်း၏ သားဖြစ်သူ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် အာဇာနည် ၉ ဦးထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အကိုကြီး ဦးဘဝင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုစဉ်က ဦးဘဝင်းမှာ ဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ (ဝန်ကြီးအဖွဲ့) တွင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
ဦးဘဝင်းတွင် ဇနီးနှင့်သားသမီး ၆ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းမှာ ဦးဘဝင်း၏ ပဉ္စမမြောက် သားဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တူတော်စပ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီမှ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉ဝ ဒီဇင်္ဘာတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော စင်ပြိုင်အစိုးရ NCGUB တွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် နေထိုင်သည်။
အာဇာနည်နေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ အမှတ်တရအနေနဲ့ ဘယ်လိုစကားများ ပြောချင်ပါသလဲ။
‘‘အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်က ၃ နှစ်သားပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သိပ်မမှတ်မိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အားလုံး အိပ်မက်တွေလိုပါပဲ။ ကျနော့်ခံစားချက်ကတော့ ပြည်သူလူထု ခံစားချက်နဲ့တော့ ကွာမယ်မထင်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အကြောင်းကို စာပေကနေ ဖတ်ရတယ်။ အဲတော့ ကျန်တဲ့ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ မခြားပါဘူး။ နှမျောတသတယ်။ ‘တို့အဖေရှိရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ၊ ဦးလေးရှိရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ’ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတော့ သိပ်မရှိဘူး။ သို့သော်လည်း ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည် ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပြည်သူလူထု ဒုက္ခရောက်နေတာတွေ (ဗမာပြည်တွင်းမှာတင် မကပါဘူး။ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ နိုင်ငံအဝှန်းမှာပဲ) အဲလိုဒုက္ခရောက်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ စိတ်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အားကျိုးမာန်တက် ကြိုးစားကြရမှာ’’
ဖခင်ကြီး ဦးဘဝင်းအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူမိပါသလဲခင်ဗျား။
‘‘ဂုဏ်ယူတာကတော့ အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က လွတ်လပ်ရေးအတွက်၊ တိုင်းပြည်အတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေ ဗမာပြည်မှာ အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီခေတ်က တပ်မတော်သားတွေ၊ တပ်မတော် အရာရှိတွေလည်း ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ပြည်သူလူထုနဲ့ တွဲပြီးတော့ အေးအတူ ပူအမျှ လုပ်ခဲ့တာတွေ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုဟာ ဗမာပြည်မှာ အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပါတယ်’’
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးသွားလို့ ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ရလဲခင်ဗျ။
‘‘တိုင်းပြည် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းအတွက် လုပ်နေတုန်းမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရရင် ဗမာပြည်ဟာ ဘယ်လိုတိုင်းပြည်မျိုး ဖြစ်မလဲ၊ ဘယ်လို ရှေ့ခရီးဆက်သွားမလဲ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထု ကောင်းစားရေး အတွက် ဘာတွေလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ၊ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်၊ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတာပါ’’
‘‘အခုအချိန်မှာ ပြန်ကြည့်ရင် တို့တိုင်းပြည်ကြီးက ဘာဖြစ်နေသလဲ။ ကျန်တဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းတို့၊ မလေးရှားတို့နဲ့
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြု အရိုအသေပေးရုံနဲ့တော့ မပြီးဘူးဗျ။ ဒီနေ့အာဏာပိုင်တွေရော၊ ပြည်သူလူထုရော၊ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ
ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ မှာကြားခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်တွေကို ဘယ်လောက် လိုက်ပြီး လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကို သေချာဆန်းစစ်ဖို့ လိုတယ်’’
အာဇာနည်ဆိုတာအပေါ်မှာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲခင်ဗျ။
‘‘တစ်အချက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ။ သူဟာ လူလားမြောက်တဲ့အချိန်က စပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ပထမ၊ လွတ်လပ်ရေးဟာ ဒုတိယ၊ လွတ်လပ်ရေးဟာ တတိယဆိုပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးကို လုံးဝမငဲ့ကွက်ဘဲနဲ့ (ရှင်းရှင်းပြောရင် စားတာသောက်တာ၊ နေတာထိုင်တာကအစ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့) တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်တယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးသွားတယ်။ အဲဒါ အာဇာနည်ပဲ။ စွမ်းဆောင်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပင်လုံညီလာခံမျိုး ပေါ်လာတယ်။ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ နီးစပ်လာတယ်။ စေတနာကလည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာ လူလားမြောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး တစိုက်မတ်မတ် လုပ်လာတာ။ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်နေရင်းနဲ့ အဲဒီနေ့က ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည် ၉ ဦးကို နှမျောတသရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ဒီနေ့ထိ မမေ့ဘဲ ဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်’’
ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အာဇာနည်နေ့အပေါ် သဘောထား ပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုရော ဘယ်လို သတိပြုမိပါသလဲ။
‘‘သတိထားမိတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့က ကျဆုံးသွားတဲ့ ကာယကံရှင်မိသားစုဆိုတော့ အာဇာနည်နေ့ဆို အမြဲတမ်း ဆွမ်းကျွေးတယ်၊ လွမ်းသူ့ပန်းခွေ သွားချတယ်၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေ လာကြတယ်၊ ဆုံကြတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ ဘယ်လို ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ။ ၁၉၆၂ လောက်က ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ချသွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၇ ဇူလိုင်မှာ ကျောင်းသားတွေကို စပစ်ပြီဗျ။ ဒါကလည်း ဖြစ်ခါစလေ။ အဲတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြပွဲတွေဘာတွေလည်း အကြီးအကျယ် လုပ်ပြတယ်။ ပြန်ပြီး ဖြေသိမ့်တဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ မှတ်မိတာ ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ (၂ဝ၁၁) ဘယ်သူလာပြီး လွမ်းသူ့ပန်းခွေချလဲ။ အာဏာပိုင်တွေထဲကပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှော့လျှော့ down grade ပေါ့။ ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး’’
အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်မလဲခင်ဗျာ။
‘‘အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည် သိက္ခာကျသွားတယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေက ကျေးဇူးသိတတ်တယ်၊ ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့
နေရာမှာ ဂုဏ်ယူတတ်တယ်၊ လေးစားထိုက်တဲ့သူကို လေးစားတယ်။ ဒီလို အစဉ်အလာ လုပ်ရမယ့်ဟာကို အစဉ်အလာဖျက်တာ၊ သမိုင်းကိုလည်း ဖျက်ချင်သလို ဖျက်တာတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ ဒါ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ နောင်လာနောက်သားတွေ၊ မျိုးဆက်သစ်တွေ တချို့ဆို မသိဘူးဗျ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းသွားတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုကြိုးပမ်းသွားကြလဲ။ မသိကြဘူး။ ဒီကနေ့ အာဏာပိုင်တွေက လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာ။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းတဲ့ အချိန်တုန်းက သူတို့ ဘယ်မှာပါခဲ့လို့လဲ၊ သူတို့အသိဆုံးပါ။ ဒါကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တယ်။ သူတို့သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းက မှားနေတယ်။
ပြည်သူလူထု အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရမယ့်အစား ဖျက်ဆီးနေတယ်။ နှိပ်စက်နေတယ်။ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေမှာ စစ်တွေဖြစ်နေတယ်။ စစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတယ်။ သူတို့ ဒီလိုသွားနေတဲ့ လမ်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းနဲ့က ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းပဲ’’
နောက်ထပ် ဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောကြားလိုပါသလဲခင်ဗျာ။
‘‘နောင်လာနောက်သားတွေအနေနဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ ရာဇဝင်၊ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကို ဖတ်ကြပါ၊
လေ့လာကြပါ။ ဗမာပြည် လွတ်မြောက်ရေးကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ အဲဒါကိုတော့ သိစေချင်တယ်’’
Posted by ngs at 06:35
Big turnout at General Aung San Museum in Rangoon
Posted by ngs at 06:32
Posted by ngs at 06:30
ငါ့ဘဝကို သူများဘောင်နဲ့ ခတ်မထားဘူး…….။
ငါ့အလှကို တုပမှုနဲ့ အရောင်မခြယ်ဘူး…….။
ငါ့စကားကို အများအကြိုက်နဲ့ ရောမလိုက်ဘူး…….။
ငါ့ဆန္ဒကို အကြောက်တရားနဲ့ မဖိနှိပ်ဘူး…….။
ငါ့ အကြားကို ၀ါဒမှိုင်းနဲ့ပိတ်မထားဘူး……..။
ငါ့စာကို သူ့အာဏာနဲ့ အဆိပ်မခတ်ဘူး…….။
ဘယ်သူ မပေးပေး ငါ့အတွေးနဲ့
အပ္ပမာဒေါ အမတံ ပဒံ
*** လွတ်လပ်စွာတွေး၍ ဘဝကို စတေးကာ လွတ်လပ်မှုကို ပေးသွားသော
ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို ဤစာဖြင့်
ဂါရဝပြုပါ၏။ အားလုံးလွတ်လပ်မှုကို တကယ်မြတ်နိုးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ngs at 06:27
ဤအမှောင်အတွင်းမှနေ၍ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ်သော
ကျရောက်နေရငြားသော်လည်း ငါကားမတုန်လှုပ် မငိုကြွေး
ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက်တို့ကြောင့်
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကား မညွတ်
ယမမင်း၏ ခွေးရေပုရပိုက်၌ ငါ့အပြစ်တို့ကို မည်မျှပင်များစွာ
မှတ်သားထားသည်ဖြစ်စေ ငါကား ဂရုမပြု
ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်သတည်း။
သခင် အောင်ဆန်း (၁၉၁၅-၁၉၄၇)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၆ အမှတ် ၁၊ ၁၉၃၆ ခု တွင် ဘာသာပြန်ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။
Engrave this quote in Our Store! Rate this Quote! TellaFriend.
http://alinsek.blogspot.com/20​10/06/blog-post_29.html ; မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို လေးမြတ်စွာ ဦးညွှတ် ဂါရ၀ပြုပါတယ်။
Posted by ngs at 06:26
အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ အထောက်အထား အစီရင်ခံစာထွက်
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် အကျဉ်းသားများကို ပေါ်တာအဖြစ် ခိုင်းစေမှုများ ဆက်လက် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
စစ်သားတွေက ပြောတယ်၊ မင်းတို့ မနက်ဖြန်အထိ အသက်ရှင်နေသေးရင် ကံကောင်းလို့ပဲ တဲ့” ဟု မြန်မာစစ်တပ်နှင့်အတူ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာသို့ ပေါ်တာအဖြစ် လိုက်ပါခဲ့ရသူ အကျဉ်းသား ကိုထွန်းထွန်းအောင်က ပြောသည်။
မန္တလေးဇာတိဖြစ်သူ ကိုထွန်းထွန်းအောင်သည် တခြားသော အကျဉ်းသား ၂၉ ယောက်နှင့်အတူ မိတ္ထီလာထောင်မှ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာတွင် ပေါ်တာအဖြစ် စစ်တပ်၏ ခေါ်ဆောင်မှုကို ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာအစိုးရနှင့် ကရင်လက်နက်ကိုင်များအကြား တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် အန္တရာယ်များလှသော ယင်းဒေသ၌ တတောင်တက် တတောဝင် ထမ်းပိုး၍ သွားရသည့်ခရီးတွင် “ကျနော်တို့ကို အစားအစာ၊ သောက်ရေ လုံလုံလောက်လောက် မပေးပါဘူး” ဟု ကိုထွန်းထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ကိုထွန်းထွန်းအောင်၏ အတွေ့အကြုံသည် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) နှင့် ကရင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (KHRG) တို့ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အဖြစ်အပျက် ၅၈ ခုအနက်မှ တခုဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့နှစ်ခုတို့ ပူးပေါင်း၍ “လမ်းလျှောက်နေရသည့် သေလူ - မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း စစ်မျက်နှာစာမှ အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်း (FCCT) ၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သည်။
အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၎င်းတို့သည် တိုက်ပွဲဖြစ်ရာဒေသ မိုင်းဗုံးများထူထပ်သည့် နေရာများတွင် စစ်သားများ၏ ရှေ့မှ ကြို၍ သွားရကြောင်း၊ အကာအကွယ် အတားအဆီးမပါဘဲ အတင်းသွားခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အကျဉ်းသားပေါ်တာတဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်မြင့်က “စခန်းကို ကျနော်တို့ ရိက္ခာတွေ သယ်ပို့ပေးရတယ်။ ပေါ်တာ တယောက်က မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေထောက် ပြတ်သွားတယ်။ စစ်သားတွေက သူ့ကို ဒီအတိုင်း ထားခဲ့တယ်။ သူက ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့် နေပေမယ့် ဘယ်သူမှ မကူနိုင်ဘူးလေ။ စခန်းကနေ ပြန်ဆင်းလာတော့ အဲဒီ မိုင်းနင်းမိတဲ့လူ သေနေပြီ” ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ပြန်ပြောပြထားသည်။
အကျဉ်းသား ပေါ်တာများနှင့်အတူ ဒေသခံရွာသားများလည်း ပစ္စည်းများ ထမ်းပိုးရန် အဓမ္မခိုင်းစေခံရကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
HRW မှ တာဝန်ရှိသူ Elaine Pearson က “မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာပါ။ အကျဉ်းသားတွေကို ပေါ်တာအဖြစ် သုံးတာ၊ လူတွေကို မိုင်းရှင်းကိရိယာအဖြစ်သုံးတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုများဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အထောက်အထားတွေပါပဲ” ဟု ပြောသည်။
Posted by ngs at 23:11
ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်များ ကချင်အရေးအတွက် မြစ်ကြီးနားသွား
ဖနိဒါ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၁၁ မိနစ်
အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ၁ နှင့် ၂ ဖြစ်သော ဦးအောင်သောင်းနှင့် ဦးသိန်းဇော်တို့က ငြိမ်းတည်ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ လာရောက်၍ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး၌ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်
“သမ္မတဆီ တိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့ သူတို့ (ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်များ) နဲ့ စကားပါးရမယ်” ဟု ငြိမ်းတည်ညှိနှိုင်း အဖွဲ့ဝင် ဦးဆင်ဝါးနော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေက ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇောင်းဟရားက တိုက်နေလို့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ခက်တယ်။ အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် လက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာမျိုး
ပြောတယ်။ အခုတော့ တရားဝင် အစိုးရ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
Posted by ngs at 22:55
ထွန်းထွန်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၀၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာအစိုးရတပ်က ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စစ်လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်
တောင်ပိုင်း SSA-S ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပြောသည်။
“ဝမ်ဆိုင်းတောင်မှာ စစ်အစိုးရတပ်တွေက ကျနော်တို့ SSA တပ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်
ဝေဟင်ကနေ MiG 26 လို့ ယူဆလို့တဲ့ လေယာဉ် ၂ စီးနဲ့ ကျနော်တို့ SSA တွေကို လာပြီးတော့ ဗုံး ၈၊ ၉ လုံးလောက် ကြဲသွားတယ်လို့ ရှေ့တန်းတပ်တွေက အဲဒီလို အစီရင်ခံထားပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဆိုင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ်အတွင်း ဝမ်ကိုင်ဖရွာအနီးရှိ ဝမ်ဆိုင်းတောင်တွင် တပ်စွဲထားသည့် အစိုးရတပ်များကို SSA ပူးပေါင်းတပ်များက ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားစဉ် မွန်းလွဲ ၁ နာရီကျော်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှမ်းတပ်မှ တပ်သားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီး စစ်လေယာဉ် ၂ စင်းက တပြိုင်နက်တည်း ပျံဝဲကာ ဗုံးကြဲခဲ့ခြင်း
“တော်တော်လေး ပြင်းထန်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကတော့ ပြိုလဲကုန်တယ်။ တပြိုင်တည်း ၂ စင်းလာတာ” ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော် မဇ္ဈိမအနေဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တွင် တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းဟူ၍ မရှိတော့ဘဲ တပေါင်းတည်း ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၂ဝ၁၁ မေ ၂၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၅၃ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ၌ SSA-S ၏ အကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စဝ်ရွက်စစ်က မီဒီယာများကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ပူးပေါင်းလိုက်သော ရှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင်မှုဖွဲ့စည်းပုံသစ်ကို မထုတ်ပြန်ခဲ့သလို အင်္ဂါနေ့က
ပြုလုပ်သော မဇ္ဈိမနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပေါင်းစည်းရန် သဘောတူညီချက် ရရှိထားသော်လည်း ဆွေးနွေးမှု ဆက်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“မူအရတော့ ပေါင်းစည်းဖို့ သဘောတူညီချက်တွေ ရသွားပြီ။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ပေါင်းစည်းကြမလည်းဆိုတဲ့
ပေါင်းစည်းပုံ ပေါင်းစည်းနည်းကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးနေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတူညီချက်တွေ၊ အမြင်ချင်း တူညီတာတွေ သဘောထားတူညီတာတွေ ရထားပြီးပြီ။ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရော နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာလည်း သက်ဆိုင်တာကိုး။ နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာ ဘယ်လိုစုပေါင်းကြမလည်း။ လက်နက်ကိုင်တပ်မှာ ဘယ်လို ပေါင်းစည်းကြ မလည်း။ နယ်မြေခွဲဝေမှုတွေ၊ လှုပ်ရှားဖို့အတွက် ဘယ်လိုသွားကြမလည်း ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်တွေ ဆက်လက်
ဆွေးနွေးနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့ကစ၍ ဖြစ်ပွားနေခဲ့သော SSA-N ဌာနချုပ်ရှိရာ ဝမ်ဟိုင်းအနီးရှိ ဝမ်လု တိုက်ပွဲတွင် ရှမ်းတပ်က
ပြန်လည် အသာစီးရချိန်တွင် အစိုးရတပ်က ဗုံးကြဲတိုက်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်ဘက်မှ တပ်သားတဦးကို အရှင်ဖမ်းမိထားကြောင်း ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဆိုင်းက ပြောသည်။
ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းရယ်နှင့် ချေးတီးမြို့ကြားတွင် တည်ရှိကာ ယခုတိုက်ပွဲနေရာသည် ချေးတီးမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၂ဝ ကျော်တွင် တည်ရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သတင်းများကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်တင်ပြနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းနှင့်
လေယာဉ်များ လာရောက်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ပြောသည်။
“အတည်မပြုနိုင်သေးဘူး။ သိထားတာကတော့ ဗုံးကြဲတာက မကြဲသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပဲလို့
ပြောတယ်။ တစီးပဲ၊ ၃ ခါ လာဝဲပြီးပြီတဲ့။ ၂ နာရီကျော်၊ ၃ နာရီကျော်၊ ၄ နာရီကျော်။ သုံးခါ လာဝဲပြီးပြီ” ဟု သူက ဆိုသည်။
အစိုးရတပ်ဘက်မှ အင်အားများ ဆက်လက်ဖြည့်တင်းနေသည်ဟု ဦးစိန်ကြည်က ဆက်ပြောသည်။
Posted by ngs at 22:48
Kachin State Refugees Face Uncertain Future
Posted by ngs at 13:38
There are15, 400 over Kachin Ethnic refugees are facing uncertain future in camps under KIO controlled areas along the China-kachin state border inside Burma. They left their home, livelihoods to escape the fighting, avoid forced labour and other human right abuse including used rape as weapon by the Burmese Army to kachin women after hearing the Burmese troop were offensive through the villages to Fight the Kachin Independent Army (freedom Fighters) which has been engaged in ongoing battle with the Burmese army since 17 years ceasefire collapsed in the midst of deadly clash one month ago.
“I fled because I previously heard stories about the torture and rape of women by the Burmese army,” said Lu Nam, 30, from the village of Madi Yan near the Chinese border. She fled with two of her children and is now living atamarket being used asatemporary refugee camp in Laiza. Her husband is atafrontier post fighting for the KIA.
“Many of the refugees have nothing to live on and we don’t know how long they can sustain their lives,” said La Rip, who works for the Kachin Development Group, which is assisting the refugees. “I don’t know what will happen to them if the KIA reaches the point of being unable to provide further help.”
The Burmese army and KIA officials held ceasefire talks near Laiza on Thursday, but the discussion did not produce any concrete results and the threat ofamajor war breaking out has made the refugees afraid to go back home.
“I don’t know when we can go back to our village,” saidamiddle-aged man who was formerlyaKIA soldier and is nowarefugee. “I think it only depends on the Burmese government.”
The Burmese government has told domestic NGOs not to give aid to Kachin war refugees who fled to KIO areas along the Sino-Burma border after the outbreak of war, according toaKachin refugee relief committee official.
“They gaveaverbal order to NGOs in Myitkyina not to provide assistance to refugees. Not only NGOs, they also ordered the religious leaders not to help us. I believe blocking of assistance to the people isaviolation of human rights,” he said.
Many NGOs including AZG, World Concern, WHO, Nyein Foundation, Shalom Foundation and Mitta Foundation operate in Myitkyina.
Mai Ja said, “We are not the armed group. We are the cannon fodder between these two armed groups, the KIO and government troops. The war refugees had to flee from the war zone when the war broke out. We are not opposing the government. Blocking relief supplies to the refugees means starving them to death. This government has no sympathy and no humanitarian consideration at all,” she told Mizzima
Posted by ngs at 13:22
Title : Protest to mark for the7July Students Massacre event
Date: 07/07/2011 ( Thursday)
Venue: in front of the Burmese military regime embassy
Title : Food donation ceremony for the memorial of7July Students Massacre event
Date: 08/07/2011 ( Firday)
Venue: Sasana Ramsi Vihara monastery , Colindale, London
Title : Peter Tatchell - Human Rights Campaigner – Special meeting
Date: 08/07/2011 ( Friday)
Time; 5:30pm to 8:00pm
Venue: Burma Campaign UK,28 Charles Square London,N1 6HT
Title: Geopolitics of Burma and Campaign Planning Workshop presented by Ma Khin Ma Ma Myo
Date: 09/07/2011 (Saturday)
Venue: Burma Campaign UK, 28 Charles Square London N1 6HT
Title : Justareminder that Aung San Suu Kyi ‘s second Reith Lecture on Lecture2Liberty ( repeated)
Channel :On BBC Radio 4
Date :09/07/2011 (Saturday)
Title : Protest for mark for the 19 July Martyr’s day
Date : 19/07/2011 ( Tuesday)
Venue: in front of Burmese military regime embassy, Green Park station ( nearest tube)
Title : Protest to call for the unconditional release of all political prisoners in Burma
Date : 21/07/2011 ( Thursday)
Title : GANDHI FILM from Freedom Film Club
Discussion will be led by Youth.
Date: 22/07/ 2011 (Friday)
Time: 18:00pm to 21:00pm
Title : Daw Aung San Suu Kyi's Reith Lecture Discussion
Posted by ngs at 10:16
ကြယ်တွေ ပြိုင်တူလင်းဖိ်ု့ လိုတယ်
မင်းတို့ နေရာပျောက်မှာ ကြောက်တာနဲ့ 
မင်း..ငါတို့ ကို ပစ်ခတ်ပြာချလည်း
မိုးတိတ်မှ အပြင်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ တော့
ငါတို့ မျက်လုံးတွေ ကန်းသင့်ရင်ကန်း ထားရလိမ့်မယ်။
Posted by Thinzar at 04:15
It is our great honour to kindly invite you all, to support and participate the demonstration to mark for the7July Students Massacre event.
In fact,7July is the significant historic day in the Burmese history. On that day in 1962, the unarmed university students who stood up for the geniune Students' Rights were shot down brutally by the Ne Win's army. Along with, the Student's Union Building was dynamited down with overahundred innocent students inside.This memories still deeply remain in our heart as the bloodiest sacrifice of our heros , not to mentionagreat loss for us in the struggle for Freedom and Human Rights for our country.
Up to now, sadly,the military government has continued the arbitary arrest, inhumane torture and imprisonment of student dissidents generations after generations. But, no matter how hard they try to oppress our innocent civilians, they can neither suppress the students' sprit of going on fighting against the militarism nor crush down the sprit of fighting peacock which will live everlasting in us.
We are going to have the demonstration to express our great honour for those who sacrificed their lives against the military dictatorship. In addition, to show our unity and solidarity to stand by all those, who are in the democratic struggle. All your presence will be much honoured.
Date : 07/07/2011 ( Thursday)
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အကို၊ အမများ သို့့့ 
ကျနော်၊ ကျမတို့ ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ (အင်္ဂလန်) အဖွဲ့မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့တွင်ကျဆုံးသွားခဲ့သော ကျောင်းသား၊သူများကို အမှတ်ရစွာ ဆွမ်းအလှူ ဒါန ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ချီးမြှင့်၍ ကုသိုလ် ပါဝင် ယူပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြာအပ်ပါသည်။ ဆွမ်းဟင်းများ ကို ကိုယ်ဆီ ချက်ပြုတ် ယူဆောင်လာ၍ လှူဒါန်းရန်။
နေ့ ရက် ။ ။ ၈ ရက်၊ ဂျူလိုင် ၂၀၁၁ (သောကြာနေ့)။
နေရာ ။ ။ The Sasana Ramsi Vihara Monastery, Colindale, London,NW9 5JU.
အချိန် ။ ။ မနက် ၁၀ နာရီ။
Posted by ngs at 12:40
Daw Aung San Suu Kyi speech on Martyrs' Day Ceremo...
Invitation to the demonstration to call for the un...
၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် သဘောထား ထုတ်ြ...
(အာဇာနည် ဦးဘဝင်း၏သား ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျ...
ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်များ ကချင်အရေးအတွက် မြစ်ကြီးနား...
ရှမ်းတပ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခံရဟု SSA တောင်ပိုင်းပြေ...